धरहरा निर्माण : छैटौंपटक पनि आर्थिक प्रस्ताव स्थगित, पुनःनिर्माण कार्य अन्योलमा
Sat, Feb 29, 2020 at 1:40pm
भीम रावललाई सेनाले ‘भीआईपी’कक्षमा छिर्न नदिएपछि... #आहा खबर# प्रधानमन्त्री ओली संकटमा, प्रभाव सचिवालयभित्रसमेत कमजोर ! #आहा खबर# मलेसियाका प्रधानमन्त्रीमा मुहिदीन यासीन नियुक्त, सपथ आईतबार #आहा खबर# ११ वर्षपछि मलेसियासँग नेपालको हार #आहा खबर# कन्हैया कुमारविरुद्ध देशद्रोह मुद्दा चलाउन दिल्ली सरकारकाे अनुमति #आहा खबर# ६ वर्षपछि पहिलोपटक भारतको अर्थतन्त्रमा सामान्य वृद्धि #आहा खबर# कोरोनाका कारण विश्व बजारमा घट्याे कच्चा तेलको मुल्य #आहा खबर# नेकपाभित्र भाँडभैलाे : बालुवाटार बबन्डरपछि बस्न थालेे नेताका घर घरमा गोप्य बैठक #आहा खबर# दबाब दिंदै प्रचण्ड, ओलीकाे अडान कायमै #आहा खबर# नेपाल कोरोना भाइरसको अति उच्च जोखिममा: विश्व स्वास्थ्य संगठन #आहा खबर# दिल्ली हिंसाः ४२ को मृत्यु, २ सय भन्दा बढि घाइते #आहा खबर# प्रम ओली र नेता नेपालबीच भेटवार्ता : पार्टीका आन्तरिक विषयमाथि छलफल #आहा खबर# शनिबार नेपाल मलेसियासँग भिड्दै, यस्तो छ हेड टु हेड अवस्था #आहा खबर# इरानमा कोरोनाका कारण ३४ व्यक्तिको मृत्यु #आहा खबर# प्रधानमन्त्रीलाई नेता नेपालले दिए चेतावनीयुक्त सुझाव #आहा खबर#
धरहरा पटक-पटक ढलेकाले पुरानो संरचना यथावत् सिसाले छोपेर २२ तलाको नयाँ धरहरा बनाउने प्राधिकरणको तयारी
मंगलवार, ५ भाद्र २०७५,	आहाखबर	1.25K
काठमाडौँ, ५ भदौ
धरहरा निर्माण गर्न आह्वान गरिएको बोलपत्र (टेण्डर) को आर्थिक प्रस्ताव खोल्न तोकिएको समय छैटौंपटक स्थगित गरिँदा पुनःनिर्माणमा अन्योल बढेको छ ।
गत वैशाख ३१ गते राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माण सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचनामा दिइएको समयमा छ वटा प्रस्ताव पेश भएका थिए । प्रस्तावको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणले पाँच निर्माण कम्पनी छनोट गरेको थियो ।
पाँच निर्माण कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव असार २६ गते खोल्ने भनी असार २० गते सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । असार २६ गतेदेखि पाँच पटकसम्म प्रस्ताव खोल्ने काम स्थगित हुँदै आएको छ । छैटौंपटक मंगलबारलाई तोकिएको मिति पनि सूचना प्रकाशित गरेर भदौ ८ गते शुक्रबारलाई सारिएको प्राधिकरणका सहसचिव एवं सम्पदा संरक्षण सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख राजुमान मानन्धरले राससलाई जानकारी दिए ।
प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका पाँच कम्पनीमध्ये कुनै एकको कागजात शङ्कास्पद भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेपछि प्रस्ताव खुला गर्ने मिति छैटौं पटक रोकिएको हो । यससम्बन्धी छानबिन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरी सकिएको उनले बताए ।
प्राविधिक प्रस्ताव पारित भएका निर्माण कम्पनीमा जेइक-लामा जेभी, सिआर ५ सिइसी-स्वच्छन्द जेभी, कुमार-सिएफइसी जेभी, जिआइइटीसी-रमन जेभी, सिआइसिओ-कालिका-रसुवा जेभी छन् । जेसीजिआईसिसी-आशीष जेभीको प्राविधिक प्रस्ताव नै फेल भएको सहसचिव मानन्धरले बताए ।
भीमसेन थापाका पालामा बनेको ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा तीन वर्ष अघिको भूकम्पसहित चार पटक ढलिसकेको छ । धरहरा पटक-पटक ढलेकाले पुरानो संरचना यथावत् सिसाले छोपेर २२ तलाको नयाँ धरहरा बनाउने प्राधिकरणको तयारी छ । यसअघिको धरहरा नौ तलाको थियो ।
नयाँ धरहरा बनाउन आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिने भएको छ । अब बन्ने धरहरामा लिफ्ट र भर्याङसमेत राखिनेछ । धरहरा गुम्बज र गजुरसहित ७२ मिटर अग्लो बन्नेछ । भत्किएको धरहराको पूर्वपट्टि नयाँ धरहरा निर्माण गरिनेछ । निर्माणको लागत रु चार अर्ब लाग्ने लागत अनुमान तयार भएको छ । यसअघि नेपाल टेलिकमले धरहरा बनाउने गरी जिम्मेवारी दिइए पनि पछि हटेको थियो । टेलिकमले आफैं नबनाए पनि रु एक अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ कार्यक्रमको धरहरा पुनःनिर्माण कोषमा रु २४ करोड जम्मा भइसकेको छ । बाँकी स्रोत सरकारले नै व्यहोर्ने भएको छ । धरहराले गोश्वारा हुलाक कार्यालय रहेको जग्गासमेत उपयोग गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सो जग्गा खाली गर्ने भनिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कूल ३९ रोपनी क्षेत्रफलमा धरहरा, पार्किङ र बगैँचासमेत बनाइनेछ । हाल हुलाक रहेको स्थानमा बगैँचा र पार्किङ निर्माण गरिनेछ । धरहरा बनाउन शुरु गरिहाल्ने र हुलाकलाई हटाउने कामलाई जारी राखिने जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवर भने प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणकै भएको बताए ।
भीम रावललाई सेनाले ‘भीआईपी’कक्षमा छिर्न नदिएपछि...
प्रधानमन्त्री ओली संकटमा, प्रभाव सचिवालयभित्रसमेत कमजोर !
मलेसियाका प्रधानमन्त्रीमा मुहिदीन यासीन नियुक्त, सपथ आईतबार
कन्हैया कुमारविरुद्ध देशद्रोह मुद्दा चलाउन दिल्ली सरकारकाे अनुमति